Muqdisho: 26 June oo xalay la xusay “Rajadu waa midnimo” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: 26 June oo xalay la xusay “Rajadu waa midnimo”
26th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Munaasabad balaaran oo lagu xusayay 26ka June oo ku beegan caawa oo kale 54-sano kadib markii ay gobollada Waqooyi ee Dalkeenna ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
26-ku June waa markii ugu horreysay ee acalan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago Soomaaliya, iyadoo 26-kii June sanadkii 1960-kii ay gobollada Woqooyi ee Soomaaliya ka xoroobeen gumeysigii Ingiriiska.
Munaasabaddan oo lagu qabtay xaruta dugsiga tababarka ee General Kaahiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, xildhibaano, wasiiro, saraakiisha Ciidanka, gudoomiiyaha gobolka Banaadir, fanaaniinta qaranka ee hobolada waaberi iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir.
Fanaaninta qaranka hobolada waaberi ayaa munaasabad kusoo bandhigay heeso ka turjumaya xornimada iyo muhiimada ay leedahay.
Muaasabadda lagu xusayay 26ka June ayaa waxaa khudbado kala duwan ka jeediyay mas’uuliyiintii ka soo qeyb gashay.
Madaxweynaha J.F Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dheer ka jeediyay munsaabada ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimada ay leedahay midnimada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday midnimada Koonfur iyo Woqooyi, wuxuuna rajeeyey in midnimadaasi si nabad ah kusoo laaban doonto.
“Dadka Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ugu nool yihiin ee magaca Soomaaliyeed sheeganaya waa u ciid, waxaan rabaa inaan iraahdo ciid wanaagsan, waa maalintii ugu horeeysay ee calan Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed oo xur ah laga taago, qof walba oo Soomaaliyeed waa inuu weyneyaa maalintaasi ku asteysan maanta” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatadii ka dhacday dalka aysan umadda Soomaaliyeed ilowsiin doonin taariikhdeenna. “dhibaato waay dhacday waxbadanna way naga qaldameen hasa ahaatee taasi macanaheedu maaha in dhibaataaasi na ilowsiiso taariihdeenna. Wax walba oo dhacay waan ka heshiineynaa Ilaahey idinkiis,”
Sidoo kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey 26 juun 1960-kii ay umadda Soomaaliyeed u istaagtay in ay qaadato kaalinteeda. “ maalintaasi wixii ka dambeeyey Somaaliya waxay u istaagtay in ay kaalinteed qaadato, halgankaasi meel ayuu soo gaaray oo aan dhisanay calankaasi baluuga ah. ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha oo ka hadlayey midnimada umadda Soomaaliyeed ayaa yiri. “Maanta waan ka fusrado badannahay maalintaas, waan ka aqoon badan nahay, waan ka tiro badan, waana ka xoolo badan nahay. Waxa naga haleysan waa siyaasadda, waana tooseeysaa, midnimadiina waa soo laabnaneysaa, waliba si wallatinimo leh iyo is jacayl ayey ku soo laabaneysaa”.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si gaar ah hambalyo ugu diray dadka ku nool magaalada Hargeysa oo ah meeshii ugu horesay ee calanka Soomaaliyeed laga taago. “Si gaar ah waxaan hambalyo u leenahay dadka ku nool magaalada Hargeysa oo ah halkii maalintaasi laga taagay calanka Soomaaliyeed, waxaan lee yahay hambalyo, waxaan kaloo idin lee yahay Ramadan Kariim”
Madaweynaha ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay guryahooda iyo goobahooda ganacsiga suraan calanka Soomaaliyeed maadaama lagu jiro Todobaadkii xurriyadda. “Todobaadkan waxaa la yiraahdaa Isbuucii xurriyadda, waxaan ugu baaqayaa umadda Soomaaliyeed in calanka Soomaaliyeed ee quruxda badan ee leh midabka baluuga ah ee xidigta dhaxda ku leh in guri kasta iyo goobaha ganacsiga laga taago, waxaan rabnaa inay ka muqato dalka isbuucii heybada, isbuucii sharafta”.
Dhinaca kale, Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey Munaasabadda 26ka June oo ku beegan caawa oo kale 54sano kadib markii ay gobollada Waqooyi ee Dalkeenna ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska.
“Anigoo ku hadlaaya magaca Guddoonka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed kana wakiil ah dhammaan xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliyeed, iga guddooma salaam diiran, qaddarin gaar ah iyo HAMBALYO HAMBALYO HAMBALYO ku aaddan sannadguurda 54-aad iyo habeenkan xusuusta mudan oo gobollo ka mid ah dalkeena hooyo ay xorrobeen, dhammaan Shacbiga Soomaaliyeed waan ugu hambalyeeynayaa munaasabaddan qiimaha leh” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Ethiopian Security Forces Arrest Dozens of Civilians in Degahbur
Wasaaradda arrimaha debadda Soomaaliya oo adeegsan doonta qalab casri ah